सुशान्तको प्रेमिका रिया चक्रवर्ती पुगिन सुशान्तको पार्थि’व शरीर राखिएको अस्पताल ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) « गोर्खाली खबर डटकम
सुशान्तको प्रेमिका रिया चक्रवर्ती पुगिन सुशान्तको पार्थि’व शरीर राखिएको अस्पताल ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
एजेन्सी, १ असार । बलिवुड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको प्रेमिका तथा अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती सुशान्तको पार्थिव शरीर राखिएको कुपर अपटल पुगेकी छन । अभिनेता सुशान्तलाई हिजो आइतबार मुम्बई स्थित आफ्नै घरमा पासो लगाएको अवस्थामा भेटिएको थियो ।
उनीहरु बीच प्रेम भएको समाचारहरु आइरहे पनि उनीहरु आफैले भने यसको बारेमा बोलेका थिएनन । तर यी जोडीलाई धेरै पटक रोमान्स गर्दै गर्दा भेटिएको थियो । आज सुशान्तको पार्थिव शरीरलाई हेर्न जादा उनलाई भावविह्वल देखिएको थियो । उनि प्लेन सेतो पहिरनमा आफ्ना केहि सहयोगी सहित त्यहाँ पुगेकी थिइन ।
रियाले तेलुगु चलचित्र तुनिंगा तुनिंगा र बलिवुड चलचित्र मेरे ड्याडकी मारुती, सोनाली केवल, हाल्फ़ गर्लफ्रेन्ड, बैंक चोर, जलेबी लगायतका चलचित्रमा अभिनय गरेकी छन ।
नेपाल जस्ता विकाशोन्मुख देशहरुमा मानिसको अभिन्न अंग मानिने मृगौला (किड्नी) धेरै फेल हुने गरेको छ ।
किड्नी हाम्रो शरिरको महत्वपूर्ण अङ्ग हो । किड्नीमा खरावी आयो भने हामिलाई बिभिन्न रोगहरु लाग्ने गर्दछन जसका कारण हामिले ज्यानै गुमाउनु पर्ने समेत अवस्था आउँदछ ।
तसर्थ किड्नी भनेको के हो ? मानव शरिरमा किड्नीले के कसरि काम गरिरहेको हुन्छ ? किड्नी कसरी काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्दछ ? किड्नी बचाउनको लागि के गर्नुपर्दछ ? यी यवत कुराहरु सबैले जान्न जरुरी छ । ग्राण्डी अस्पतालको विशेषज्ञ डाक्टर प्रेमराज ज्ञवाली सँगको कुराकानीबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा आज हामी किड्नी सम्वन्धि १० महत्वपूर्ण जानकारीहरु प्रस्तुत गर्दैछौ ।
किड्नीको काम के हो :
किड्नीले शरीरमा रस एवं रगतमा उपस्थित विजातीय तथा अनावश्यक तत्वलाई पिशाबबाट बाहिर निकाल्ने काम किड्नीले गर्दछ । प्राकृतिक रूपमा स्वस्थ किड्नीसँग दिनहुँ ६० किलो जति पानी छान्ने क्षमता हुन्छ । फेरि पनि सामान्य रुपमा किड्नीले २४ घण्टामा एकदेखि दुई लिटर पिशाब बनाएर शरीरलाई निरोग राख्दछ ।
किड्नी र मुटु बिचको सम्वन्ध :
किड्नी फेलहुनाका प्रमुख कारणहरु के के हुन :
किड्नी फेलहुनुका मुख्य कारणहरुमा मुटु, दम, श्वास, टि‍.बी., सुगर, प्रेसरजस्ता रोगहरुको निदानका लागि भनेर आधुनिक औषधीहरुको बढी सेवन गर्नु हो । यी आधुनिक औषधीहरुको अल्पकालीन सेवनको विनाशकारी प्रतिक्रियाको रुपमा पनि किड्नी फेल जस्तो गम्भीर रोग हुने गरेको देखिन्छ । यी आधुनिक औषधीहरुको विषाक्त प्रभावका कारण नै किड्नी तथा पिशाबसम्बन्धी रोग उत्पन्न हुन्छ ।
किड्नी भनेको के हो रु यो हाम्रो शरिरमा कहाँनिर हुन्छ :
किड्नी खराव हुनु भनेको के हो :
नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम र यसको लक्षणहरु के के हुन :
किड्नीमा फिल्टर अर्थात् स–साना छिद्र हुन्छ, जसले खराब तत्वलाई शरीर बाहिर निकाल्ने र राम्रो तत्वलाई शरीरका लागि लाग्दछ । नेफ्रोटिक सिन्ड्रोममा किड्नीमा जुन फिल्टर हुन्छ, त्यसका छिद्रहरु ठूलो भएर जान्छ र ती छिद्रबाट शरीरका लागि उपयोगी तत्व पनि खराब तत्वका साथमा बाहिर निस्कन्छ । परिणामतः विहान अनुहार सुन्निने तथा बेलुका खुट्टा खासगरी पैताला सुन्निने गर्दछ ।
किड्नी स्टोन (पत्थरी) , यसको लक्षण र उपचार :
किड्नी स्टोन तथा पत्थरी आमरुपमा देखापर्ने समस्या हो । यो किड्नीसम्बन्धी दोस्रो मुख्य समस्या हो । बिरामीको पिशाबमा केही तत्व तथा रसायनको मात्रा बढी हुन्छ । जुन तत्व पिशाबसँग घोलिदैन, जुन जमेर स्टोन अर्थात् पत्थर बन्न जान्छ । क्याल्सियम, फास्फोरस, यूरिक एसिड, सिस्टीन र कैयौं अन्य तत्वले स्टोन बनाउँदछ ।
यदि पत्थर ६ मि.मि. भन्दा सानो छ भने त्यो पिशाबको माध्यमबाट बाहिर निकाल्न सकिन्छ । त्यसका लागि अपरेशनको आवश्यकता पर्दैन । दुखाई धेरै भयो र धेरै रगत आइरहेको छ भने चाहिं अपरेशनको जरुरत पर्दछ । १० मि.मि. भन्दा बढी मात्राको पत्थरी कहिल्यै पनि पिशाबबाट निस्कन नसक्ने हुँदा त्यसको अपरेशन गर्नुबाहेक अन्य विकल्प हुँदैन ।
सावधानी स्टोन नबनोस् भन्नका लागि दिनमा तीनदेखि चार लिटर पानी अनिवार्य पिउनु पर्दछ । पानीको कमी भयो भने केमिकल कन्सन्ट्रेशन बढ्दछ भने पानी बढी भयो भने कन्सन्ट्रेशन कम हुन्छ । पिशाब आउँदा रोक्नु हुन्न । पिशाब रोक्दा केमिकल कन्सन्ट्रेशन बढ्छ । किडनीको कुनै विरामी वा संक्रमण छ भने तुरुन्तै उपचार गराउनु पर्दछ किड्नीको सबै रोगहरु स्थायी हुँदैन । सही उपचारबाट खराब किड्नी ठीक हुन सक्छ ।